अनुभव खाती - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं – तपाई आफ्नो मासिक तलब आए पश्चात के गर्नु हुन्छ? आवश्यक खर्च अनि सञ्चय? साथी भाइसँग रमाइलो ? या आफ्नो अनि बालबच्चाको चाहाना पुरा ? - सुन्दा अचम्म लाग्ला नेपाल कै एक युवक छन् जसले आफ्नै मासिक तलबको दममा आधा संसार घुमी सकेका छन्।
अनुभव खाती का लेखहरु :